Sababta Daabacaadda Daabacaadda
Software Daabacaadda Miisaanka
Maxay tahay sababaha ku saabsan qaabka bogagga iyo noocyada daabacan?
Sababta ayaa ah qaabeynta qaababka sare, hoose, dhinacyada, ama qaybta qoraalka ama garaafyada bogga si loo dhigo qoraalka looga soo horjeedo mid ama dhowr calaamado qaas ah - inta badan bidix ama midig, ama labadaba.
Qoraalka saxda ah wuxuu weli ku dhuujiyaa quseyn gaar ah oo tixraac ah bogga:
Qoraalka bidixda ah ayaa isticmaalaya marinka bidix iyada oo tixraaciisa tixraaca. Qoraalka dhinaca bidix ayaa taabanaya marinka bidix laakiin qoraalka u dhow marinka midigta ayaa daboolaya dabiiciga ah halkaasoo erayada jabo; ma jiro isbeddel xadhig u dhexeeya ereyada si loo hubiyo in qoraalka uu ka soo baxayo marinka midig.
Qoraalka saxda ah ee saxda ah waa sida bidix-xaqiiqda-laakiin dhinaca dhinaca ka soo horjeeda ee bogga.
Qoraalka dhexe wuxuu isticmaalaa xariiq khayaali ah bartamaha bogga sida hagaha tixraaca. Khad kasta oo ka mid ah cutubka ayaa loo kala saaraa sida maaddada si siman u dheellitiran dhinaca bidixda iyo midigta (ama sare iyo hoose) ee xariiqda dhexe.
Qoraal dhammaystiran oo macquul ah ayaa ujeeddadu tahay ujinta midabaysan ee ka soo horjeeda gudaha gudaha iyo dibedda, ama dusha sare iyo kan hoose, ama labadaba. Sida caadiga ah, kaliya jumlada ugu danbeysa ee cutubka ayaa lagu caddeeyay kaliya hal mar. Haddii xitaa xukunka ugu dambeeya uu si buuxda u caddeeyo, qaabka waxaa loogu yeeraa xaqdaro qasab ah.
Diiwaanka xogta, nambarada waxaa laga yaabaa in lagu dhajiyo ama laga tago - ama si buuxda loogu caddeeyey hareeraha astaanta gaarka ah. Tusaale ahaan, tirada miisaanka, tusaale ahaan, guud ahaan waxay ku shaqeeyaan xaq u-caddaynaya maaddada ka hor jumlada, ka dibna bidix-caddaynaya nambarada soo socda. Habkani wuxuu ku badan yahay warbixinta ganacsiga.
Ujeedada qoraal ahaaneed
Qoraalka dhabta ah ayaa guud ahaan loo tixgeliyaa si sahlan oo loo akhriyo, taasina waa sababta buugagta iyo wargeysyada intooda badani xaq u yeeshaan qoraalka, cutubka qaybta. Inta badan waraaqaha ganacsiga, tusaale ahaan, waxay si buuxda ugu caddeeyeen cutubka ku salaysan iyo qiyaasta sare ee saxda ah halkaasoo cutubyada ay bilaabaan warqad cusub.
Sawirro ayaa laga yaabaa inay sidoo kale xaq u leeyihiin. Isticmaalka macnaha ereyga loogu talagalay sawirada waxaa loola jeedaa sida qoraalka u socdo agagaarka shaxanka. Tusaale ahaan, haddii aad ka tagto-caddeeysato sawir, qoraalka ayaa ka soo baxaya dhinaca bidix ee garaafka dhinaca midigta midig-iyadoon loo eegin meeleynta sawirka ee ku xiran dhinaca bidixda. Sawirada si dhammaystiran loo qoondeeyey oo ku wareegsan sheyga daboolan. Iyada oo sheyga, xuduudaha dheeraadka ah, oo ay ku jiraan joornaalka asaasiga ah iyo jajabiyeyaasha , si fiican u jaanqaada xidhiidhka qoraalka sawirka.
Dulmarka buuxa ee qoraalka wuxuu abuuri karaa meel aan caddaalad ahayn oo mararka qaar muuqaalkiisa cad iyo wuduudaha meel cad oo ku yaal qoraalka. Marka loo adeegsado caddayn khasab ah, haddii khadadka ugu dambeeya uu ka yaryahay 3/4 oo ah width width, booska dheeraadka ah ee lagu daro ereyada ama xarfaha ayaa si gaar ah loo dareemi karaa iyo jahwareer.
Aqoonsiga guud ee isku dhafan
Sharcigu wuxuu xakameynayaa xiriirka qoraalka ee marin-u-dhigyada ama aasaas kale. Shuruudaha kale ee farsamaynta qaababka qaab-dhismeedka mararka qaarkood waxa lagu wareersan yahay sababaha :
Kerning waa qaabaynta isbeddelka u dhaxeeya labada lammaane ee xarfaha. Tusaale ahaan, xarfaha A iyo T ayaa laga yaabaa inay leeyihiin qaddiyadooda la qiyaasi karo si looga fogaado faraq yar oo bannaan oo u dhexeeya kuwa u muuqda kuwo aan ku habbooneyn xarfaha kale ee jumlada. Kerning badanaa waxaa loo qaabeynayaa qaabab kala duwan oo lagu daabacay qiyaaso waaweyn, sida boorarka iyo boostarada.
Hoggaamintu waxay u taagan tahay masaafada u dhexaysa qadarada qoraalka, oo loo yaqaanay tobanle.
Raadinta waxaa badanaa lagu wareersan yahay kerning. Raadinta waxaa loola jeedaa kala-goosashada u dhaxeysa dhammaan walxaha ku jira xariijin waxaana inta badan lagu tilmaamaa boqolkiiba qaabka caadiga ah. Tusaale ahaan, in la adkeeyo raadinta cutubka illaa 95 boqolkiiba ayaa "ku cadaadin doonta" qoraalka, iyada oo la balaarinayo ilaa boqolkiiba boqol inay qoraalka u muuqdaan mid balaaran. Beddelka hagidda ee la socoshada waxaa loo isticmaali karaa naqshadda buugta, si looga fogaado faqradaha ku dhameeysta hal ereyga hoose ee hoose.
Barashada sida loo sameeyo Daabacaadda Desktop
Shabakadda Press: Waa Maxay Heerka iyo Sida loo Isticmaalayo
Baro in aad ku calaamadiso Calaamadaha Calaamadaha Gaarka ah ee Cilmi-baaris kasta, Mac ama PC
Foornooyinka saxda ah
Dinosaur Free Free Fonts
Abuur Shahaadada Aqoonsiga ee Microsoft Word
Software Desktop Publishing Linux
Fahmidda iTunes Season Pass & Sidee Bixisaa
Sida Loo Helo Badankooda Lacagta Fududkaaga Jirka
Ku dhejinta MySQL ee Mac OS X 10.7 Lion
8-da ugu fiican ee la adeegsankaro baabuurta la iibsan karo ee sannadka 2018
25ka ugu fiican iPhone Apps Free
Xeerarka HTML ee Calaamadaha Luuqadaha Czech, Slovak, iyo Sloveniyaan
5 Talooyin ku Saabsan Yihiin inaad Ka Hortagto Shaqo Ammaan ah
Maxay Foomka ORF?
Talo-siinta Blackberry: Sida loo Nadiifiyo Cache-ka Adduunka
Waa maxay Wareegga La Wareegay Sidee Ayuu Shaqeeyaa?
Barnaamijka Maareynta Mashruuca ee ugu sareeya 6
Waxkasta oo aad u Baahantahay inaad ogaatid qawaaniinta yar
Beddelka Viber ee loogu talagalay wicitaanka smartphone
Talooyin loogu talagalay Gadashada Flash Drive
Sida loo kordhiyo Folders si iTunes
Dhageysiga PC-ga Game Video for Cheats
Isticmaal Imtixaanka Apple Hardware (AHT) si aad u heshid Dhibaatooyin